I-India yesibini I-COVID-19 yitshangatshangisa ngakumbi kunesokuqala
Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba zaseIndiya » I-India yesibini I-COVID-19 yitshangatshangisa ngakumbi kunesokuqala
I-India yesibini ye-COVID-19 wave
Umnumzana Amitabh Kant, u-CEO we-NITI Aayog, umgaqo-nkqubo woluntu ocinga ngezorhulumente, namhlanje uthe i-India yesibini ye-COVID-19 wave iyintlekele ngakumbi kunale yokuqala.
Umphathi omkhulu uthe isixa esaneleyo sokugonya siya kufumaneka ukusukela nge-Agasti ukuya phambili.
Isidingo sokwakha izakhiwo zezibhedlele, izibonelelo zabasebenzi, kunye nesibonelelo se-ICU kwinqanaba elisezantsi sachazwa njengethuba lecandelo labucala lokunceda ilizwe.
Kuyoyikiswa ukuba xa kuthe kwakho iliza lesithathu, abantwana nabantu abasemaphandleni baya kuba nefuthe.
Umtshangatshangiso wesibini wagubungela inkqubo yezempilo okwethutyana, kwaye urhulumente uthathe amanyathelo amaninzi ukusukela ngoko ngokuhla okuzinzileyo kwenani lamatyala e-COVID-19 asebenzayo.
"Kubekho ukonyuka kwamaphulo okugonya, kwaye icandelo labucala lidlale indima ebaluleke kakhulu ekulawuleni ubhubhane kwaye lincome iinzame zikarhulumente ngendlela ebonakalayo," utshilo uMnu.
Ethetha "ngeseshoni yokuNxibelelana nokuGcina uBomi kunye nokuPhila," ehlelwe yi-Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), ngokudibeneyo nenkampani yokubuka iindwendwe i-OYO, uMnu.
“Kunokubakho ukungalingani kwemfuno ebambekayo kugonyo ngoJuni-Julayi kodwa ukusukela ngo-Agasti ukuya phambili kuyakubakho isixa esaneleyo sezitofu ezikhoyo. Ukusukela ngoko ukuya phambili, kuya kufuneka sikwazi ukugonya wonke umntu eIndiya ngokufanelekileyo kwaye oko kufanele kusinceda, ”wongeze watsho.
UMongameli weBhodi yoKhenketho yase-Afrika uthumela uvelwano ngokusweleka kwe-Nkulumbuso yase-Mauritius
IHolland America Line irhoxisa iNieuw Statendam kunye neVolendam yaseYurophu yokuhamba ngenqanawa ehlobo
Iindaba zokuhamba zaseYurophu
Iimarike ezintlanu ezikhulu zokuhlala neendawo zokutyela zaseYurophu ukuya kufikelela kwi-418 yeebhiliyoni zeerandi kwingeniso kulo nyaka
26 imiz edlule